Ogaden News Agency (ONA) – shir si heersare ah loo soo agaasimay oo ka dhacay caasimada Helsinki ee dalka Finand
shir si heersare ah loo soo agaasimay oo ka dhacay caasimada Helsinki ee dalka Finand
Posted by maamule1	/ May 24, 2011
Waxaa maalintii Sabtida ee bishu ahayd 22-5-2011 lagu qabtay magaala madaxda dalka Finlad shir balaadhan oy ka soo qaybgaleen dadweyne farabadan oo ka kala socda jaaliyadda S.Ogadenya iyo jaaliyadda Somaliyeed. Aayado qur’aan ah iyo wacdi diini ah ayuu shirka ku furay sheekh maxamed al azhari. kadib waxaa codbaahiyaha lagu soo dhoweeyey gudoomiyaha jaaliyada ogadenia ee dalka finland mudane axmed cali (axmed jamaal) oo ka warbixiyey waxqabadka jaaliyada iyo taariikhdeeda.
Waxaa kaloo meesha ka hadlay oo qudbado wax ku ool ah kasoo jeediyey aqooyahaniin soomaaliyeed oo dhamaantood kuwada qanacsan halganka xornimo doon ee JWXO ay hormuudka katahay, waxaana kamid ahaa suxufiga soomaaliyeed ee cabdiqaadir xasan bolay oo aad ugu nuuxnuuxsaday siddii uu ahaa halkankii ururkii SYL ay ula dagaalantay cadawga ummada soomaaliyeed iyo siday udoonayeen inay umadda uga xoreeyaan gumeystayaashii kala qayqaybiyey carriga soomaaliyeed.
intaas kadin ayaa waxaa codbaahiyaha lagusoo dhoweeyey hogaanka arimaha bulshada iyo abaabulka(jwxo) mudane maxamed cabdi yaasiin oo shacabweynihii shirka soo xaadiray siiyey warbixin dheer oo meelo badan taabanaysa iyo taariikhdii dheeraayd ee uu soo maray halganka ogadenia.
kadibna waxaa codbaahiyaha lagusoo dhoweeyey gudoomiye ku xigeenka jabhada wadaniga xoraynta ogadenia mudane Maxamed Ismaaciil Cumar oo isna shacabkii siiyey warbixin dheer oo qiimo badan, kana sheekeeyey guulaha uu gaadhay halganka ay JWXO hormuudka ka tahay gudo iyo dibadba. Waxa uu ku dheeraaday sida wayaanuhu uu naflacaari u yahay, isuguna dayayo inuu u jaha wareeriyo shacabka, kolbana dhan kaga imaanayo isagoo isku daygiisa ugu danbeeya uu yahay inuu leeyahay waxaan la heshiiyay JWXO, taas oon wax kajirta jirin.
maa shaa allaah, guul weeye.
mas`uuliinta JWXO ilaahay khayr ha siiyo, jaaliyadda reer Ogaadeeniya ee Finland guulaysta, sii giijiya